BBC Nepali News America Entertainment Taja News Latest News All News Educational
Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 GMT
कोभिड–१९ संक्रमणको महामारीका कारण गर्भवती र सुत्केरीको नियमित चेकजाँचमा बाधा पुगिरहेको छ । यस्तो बेला परिवारको सचेतता निकै जरुरी छ । त्यस्तै गर्भवती र सुत्केरी आफैंले पनि विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । समस्या परेमा चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 GMT
संक्रमणको याम : कसरी बच्ने ?
चिकित्सकहरूका अनुसार यो संक्रामक रोगहरूका लागि उर्वर याम हो । डेंगु, औलो, जण्डिस, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस, झाडापखालादेखि हैजासम्मले यसबेला आक्रमण गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने यस्ता संक्रमणबाट बच्न गाह्रो भने छैन ।
किन गर्छन् मानिसहरु आत्महत्या ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार हरेक वर्ष विश्वभरमा लगभग १० लाखभन्दा बढी मानिसहरुले आत्महत्या गर्छन् । हरेक २० सेकेण्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्छ । नेपालमा पनि लकडाउन भएदेखि (११ चैत्रदेखि २० जेठसम्म) ११ सयभन्दा बढी मानिसहरुले आत्महत्या गरिसकेको तथ्यांक केन्द्रीय प्रहरी विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।